1 KỌRINT 6 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 6)
Gịnị mere o ji bụrụ na unu na nwanne unu nwoke nꞌime Kraịst nwee esemokwu, unu eburu okwu ahụ gaa nꞌụlọ ikpe ka ndị na-ekweghị ekwe kpeere unu ikpe? Gịnị gbochiri unu iji okwu ahụ gaa nꞌọgbakọ Kraịst, ka ndị kwere ekwe nọkọọ doziere unu okwu ahụ?
Ọ̀ bụ na unu amabeghị na ọ bụ anyị ụmụ Chineke gaje ikpe ụwa a ikpe? Ebe unu gaje ịchị ụwa nile, gịnị mere unu enweghị ike dozie ihe ntakịrị pụtara nꞌetiti unu?
Ọ bụrụ na esemokwu dị otu a adapụta nꞌetiti gị na nwanne gị, gịnị mere ị ga-eji were okwu ahụ jekwuru ndị na-enweghị ọnọdụ nꞌime Kraịst ka ha kpee ya?
Ana m ekwu okwu ndị a ime ka ihere mee unu. Ọ̀ ga-abụ na e nweghị ike ịchọta ọ bụladị otu onye maara ihe nꞌetiti unu onye ga na-ekpe ikpe dịrị ụmụnna nꞌime Kraịst?
Leenụ! nwanne ji nwanne ya aga ụlọ ikpe, na-ebo ya ebubo nꞌihu ndị na-ekweghị ekwe!
Ebe unu na-enwe esemokwu nke unu ji aga nꞌụlọ ikpe, ọ pụtara ìhè na unu na-ala azụ nꞌokwukwe unu. Gịnị gbochiri gị idi na ịnagide mmejọ e mejọrọ gị na nghọgbu a ghọgburu gị?
Ma kama unu ga-anagide mmejọ, ma die nghọgbu, ọ bụ unu onwe unu na-emegbu ndị ọzọ, ọ bụladị ụmụnna unu nꞌime Kraịst.
ndị nile na-ezu ohi, ndị anya ukwu, ndị na-aṅụbiga mmanya oke, ndị nkwutọ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe ha nwere, agaghị eketa oke nꞌalaeze Chineke.
Dị ka Chineke si site nꞌike ya mee ka Onyenwe anyị site nꞌọnwụ bilie, otu ahụ kwa ka ọ ga-esitekwa nꞌike ya mee ka anyị si nꞌọnwụ bilie.
Ọ̀ bụ na unu amataghị na ahụ unu bụ akụkụ ahụ Kraịst? Ọ̀ dị mma na m ga-eji ahụ Kraịst mee ka e jikọtaa ya na ahụ nwanyị akwụla? Tụfiaa! Chineke ekwela.
Ọ̀ bụ na unu amataghị na nwoke ọ bụla ya na nwanyị akwụla nwere mmekọrịta esorola nwanyị ahụ bụrụ otu anụ ahụ? Nꞌihi na e kwuru ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, “Ha abụọ ga-abụ otu anụ ahụ.”